हिमालयनको ४ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सुचिकृत « Nepal Bahas
हिमालयनको ४ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सुचिकृत
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:५३
१६ कार्तिक, काठमाडौं । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट वितरण गरेको ४ प्रतिशत बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । ४ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । इन्स्योरेन्सले गत असार २९ गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित ४ प्रतिशत बोनस शेयर आज नेप्सेमा सूचीकृत गराएसँगै कुल ४ लाख १० हजार ८८० कित्ता शेयर नेप्सेमा थपिएको छ ।
कम्पनीले कर प्रयोजनका लागि ३.७५ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बोनस शेयर पछि हिमालयनको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड भन्दा बढी भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा इन्सुरेन्सले १७ करोड ३० लाख ७० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
२० निर्जीवन बीमा कम्पनीः कुनले कति आर्जन गरे बीमाशुल्क ?
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले पहिलो त्रैमास गरे १ बढि मुनाफा, कुनको कति ?
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गरायो रेटिङ्ग